Ihe Nketa Worldwa na Hungary | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Hungary, Ihe ị ga-ahụ
Hungary O nwere ike ịbụ obere obodo mana o nwere ọtụtụ ebe na UNESCO ewere na o kwesiri ịbụ Ihe Nketa Worldwa. Mgbe ọrịa a na-efe efe ma nwee ike imeghari oge njem, kedụ maka ileta Hungary?
Na ndepụta UNESCO bụ mpaghara na-eto eto mmanya, nnukwu ụlọ ụka ochie, ala ịta ahịhịa mara mma, Budapest, necropolis Christian na grottoes ndị e liri n'ala dị ka akụkọ ifo.
Ka anyị malite njem anyị na isi obodo Hungary, ọmarịcha Budapest. Obodo a nwere Celtic na mmalite Roman, sitere na ndị Hungaria biri na narị afọ XNUMXth. Mgbe ahụ ndị Mongol na ndị Ottomans, mgbanwe ndị ahụ, ndị Soviet ... Ihe niile ahapụla akara ya.
N'ikwu okwu banyere ndepụta UNESCO na Budapest, mpaghara ahụ bụ World Heritage na-esite na Margaret Bridge ruo Freedom Bridge. Nke a bụ ihe gaa na Buda Castle, ọdụ mmiri nke Danube na Andrássy Avenue. Ha atọ gụnyere na mpempe akwụkwọ ụgbọ mmiri Danube.
El Dalọ Buda o Budai Vár, bụ ụlọ eze akụkọ ihe mere eme. Nwere a mbubreyo gothic style ma e wuru ya na narị afọ nke XNUMX, n’elu ugwu na taa dị na agbata obi ochie nke bụ akụkụ nke ihe nketa bara uru.
Ruo ebe e wusiri ike ị rute na ọchị ọchịN'oge a kwụsịtụrụ ọrụ ahụ mana ọ ga-amaliteghachi n'ọnwa na-abịa. Lọ ahụ na-arụ ọrụ ọdịbendị ma gbanwee ọtụtụ mgbanwe n'oge oge. Ezie na e nwere ụfọdụ ochie nkọwa na nnukwu ụlọ na ụkwụ gịNke bụ eziokwu bụ na ụdịrị baroque bara ụba. Ọ dị mkpa ịkọwapụta ịdị adị nke ochie ochie site na nke ndị na-emepụta mmanya na-ere ngwaahịa ha ma rute ugbu a.
La Chọọchị Matías, akara nke obodo, ọ dị n'ime obi agbata obi. Bọchị si nke iri na atọ na narị afọ ọ bụkwa ụlọ alakụba na oge ndị Turks. Taa ọ nwere ụdị neo-Gothic, mana anabatara ya naanị na narị afọ XNUMX. Ọ nwere ụlọ elu abụọ dị iche iche dị iche iche na taịl nile taịl nile mara mma. Highestlọ elu kachasị elu bụ kpọmkwem ihe ha na-akpọ ílọ elu Matías ma ị nwere ike ịrịgo ya site na steepụ dị gburugburu.
N'ime chọọchị ahụ, e nwere ọtụtụ ọmarịcha ọrụ nka, seramiiki na iko tụrụ àgwà. Ọ bụ ebe a na-eleta na Budapest ka ị ghara ileghara ya anya. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga mkpagharị, enwere ọgba na ọwara n’ugwu ndị ga-efu obere oge.
Na ndepụta anyị gbakwunye n'ụsọ oké osimiri Danube. Lee ndụmọdụ m bụ ka ị gafere n'akụkụ osimiri wee rute Dune-korzó, akụkụ dị n'etiti Lánchid Bridge na Isabel Bridge. Nke a bụ ebe ncheta nke holocaust: 60 akpụkpọ ụkwụ abụọ maka ụmụ nwanyị, ụmụ nwoke na ụmụaka na-echeta ndị ahụ metụtara, ndị na-eguzogide, ndị Juu nwụrụ n'ihi okwukwe ha.
Na ikpe azu, na Budapest, ikwesiri jiri nwayọọ na-aga Andrássy Okporo ụzọ. Venuezọ a sitere na narị afọ nke XNUMX, narị afọ nke mgbanwe ndị mepere emepe na Europe dum. Site n'ike mmụọ nsọ site na Paris, onye mmebe ya, Count Gyula Andrássy, mere a n'okporo ámá mara mma ma dịkwa ntakịrị, awụlitere na mbụ na pavụ osisi na ubi na ụlọ ahịa. Nke a bụ State Opera, Paris Department Store na Hopp Ferenc Oriental Museum.
E kewara okporo ámá ahụ ụzọ atọ na N'okpuru ebe a na-agba metro kasị ochie na kọntinent Europe na mara ọdụ na ị nwekwara mara. Ije ije, ụfọdụ ịzụ ahịa, kọfị na ịnyagharị n'okporo ụzọ ụgbọ oloko ma ị nwere ike ịga ije n'echeghị echiche.
Hapụ Budapest anyị gara Mpaghara mmanya nke Hungary, Tokaj. N'ebe a, ọdịdị ihu na-ezute ọdịbendị. Ugboro n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ, dị na ụkwụ nke ugwu Zemplén, na nkwụsị nke osimiri Tisza na Bodrog. Aha mmanya zuru oke na mpaghara mmanya bụ Tokaj-Hegyalja00 ma ọ gbanwere na 1737 na mpaghara 27 a raara nye osisi vaịn ahụ. Ala mgbawa ugwu, ihu igwe, ha niile na - enyere aka ịme mmanya ka ọ dị ukwuu.
Olee ụdị mmanya ọ bụ? Ebe a mmanya dị ụtọ nke ukwuu na-ekewaghị ekewa. Ha na-ekwu na Louis XV kpọrọ ya «eze mmanya«. Ihe dị mma bụ na ị nwere ike gaa na ubi vaịn, na wineriesEe, mee uto ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka nri abalị ma were ihe ncheta.
N'aka nke ọzọ, enwere ochie Christian necropolis nke Pécs, oge ochie Sopianae. O nwere mmalite ndị Rom ma malite na narị afọ nke abụọ. Ọ bụ isi obodo dị mkpa na narị afọ nke anọ na necropolis sitere na mbubreyo Roman na oge Ndị Kraịst. Enwere narị ili, chapels na oke crypts. Ọ bụrụ n'ịchọrọ nka na ije, ọ bụ ebe na-atọ ụtọ n'ihi na ọ bụ ebe a na-eli ozu ndị Europe ka a na-echekwa ọtụtụ ụlọ nwere mgbidi na oge ịchọ mma mbụ.
Ọzọ nke Hungary si World Heritage saịtị bụ Pannohalma Abbey, Northern Hungary, na mpaghara Pannon. Ọ bụ abbey oge ochie nke bara nnukwu uru. Ọ bụ ndị mọnk Benedictine hiwere ya na 996 na nsọpụrụ nke San Martín. O nwere ogige mara mma, ahịhịa ndụ, ubi vaịn, mmanya mmanya, ebe a na-a teaụ tii na ụlọ oriri na ọ restaurantụ andụ na ụlọ mbikọ. Obodo ndị mọnk ka dị n'ike.
N'ikpeazụ, Aggtelek caves nke karst sitere. Mpaghara ahu bara uba nke ukwuu site n’ise ihe omuma na ihe omumu gbasara n'etiti Hungary na Slovenia. na trekking Ọ bụ usoro nke ụbọchị ahụ na njem kachasị sie ike nwere ike ịdịru awa asaa. Ma banyere ọgba, ndị Ọgba Baradla ọ karịrị afọ nde abụọ na kilomita 26 n’ogologo. O buru ibu, juputa na ya stalagmites, ndị kachasị ewu ewu bụ Ire asụsụ nne, Halllọ Nzukọ nke ndị Refeyim, Halllọ Nzukọ nke Ogidi ma ọ bụ Dragon Head, ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị ya, enwere ihe dị ka 1200 ọgba.
Holloko bụ obodo ochie, n'ebe ugwu nke mba ahụ. Ọ dị mma ime obodo ochie, nwere mgbidi ọcha, owuwu ụzọ mbata, nke edoziri na ụgbọelu na-eduga na ụlọ ụka ụlọ elu osisi. Enwere ụlọ 67 bụ ihe nketa, nke ndị mmadụ bi na ya, ma ọ bụ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie ma ọ bụ ụlọ ọrụ aka na-anabata ndị njem. Ọ bụ ebe ọdịnala, nwee olu nke ya, nri ya na uwe ya.
Na filially, na Mpaghara Hortobagy, ala ahịhịa juru. Ehi na-ata nri ebe a nwayọ, enwere ndị na-agba ịnyịnya, atụrụ, ebe obibi ọdịnala iji rahụ ụra ma rie ma nwee obi ụtọ na-enweghị atụ nke ala ahịhịa juru na Europe. Ọ bụrụ n ’ịga n’oge mgbụsị akwụkwọ, ọ kacha mma ịghara ịhapụ mbugharị nke kreenu, ìgwè atụrụ na ìgwè ewu na atụrụ na-agafe na mbara igwe.
Ndị a bụ Ihe nketa ụwa Hungary. Mara mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Hungary » Ebe ihe nketa ụwa na Hungary